Vagadziri vekunze, Vagadziri - China Kunze Kwefekisheni
fekitori yakawandisa murume anokwira shangu, zvinopisa zvinotengesa zvitsva, shangu dzemitambo varume
Kutungamira kwezuva rinonakidza-rakazadza munzira iyo mune shangu yekukwira! Faux yeganda uye mesh kumusoro. Lace-up kuvharwa. Inodzivirira rubhi chigunwe. Chitsitsinho dhonza loop. Rwakadzika rurimi uye kola. Breathable mesh lining inopa yakakura mukati-shangu kunzwa. EVA midsole inopa nyaradzo yakagadzikana. Rubber outsole inoburitsa yakakwirira-inoshanda kusimba, kusimba, uye kudhizaina Chigadzirwa Ruzivo Chinyorwa Nha.
Yazvino Inotendeseka Dhizaini Yemitambo Yekunze Shangu dzeVarume Athletic Shangu
Iyo yakavimbika yekumusoro dhizaini uye yepamusoro outsole yekubatirira yejira nzira yekukwira shangu ichave nechokwadi chekuti mamiriro ekunze akaipa haamboderedze hurongwa hwako hwekufamba munzira. Yakaderera-profiles kukwira shangu kuti ifambe zvakanaka. Yakagadzika yakavharwa mesh kumusoro neyakagadzirwa akafukidza. Synthetic toe cap uye chitsitsinho chekuwedzera abrasion kuchengetedzwa. Tsika yekaseti-kumusoro dhizaini yakasarudzwa yakakodzera. Yakaputirwa machira yakarukwa yekuwedzera mukati kati. Ihuremu hwakareruka hwekunyaradza kusingaperi, cushioning yepamusoro, uye simba rakanyanya kudzoka. L ...
dhizaini nyowani yekufuka machira masiketi anofema emhando dzekukwira shangu dzevarume
Idzo shangu dzekukwirisa dzinova nechokwadi chekuti unogara wakatsiga uye uine chivimbo pamakumbo ako zuva rose iwe uchiramba uchifamba munzira idzo. Anoremerwa anotsvedza ekutsvedza marokwe akagadzirwa nemucheka uye pu kumusoro. Textile lining yekufuka inofema. Dual-density compression yakaumbwa EVA midsole inogadzirwa kuti ipe hwakawanda kumanikidza kuramba kune kwenguva refu cushioning uye kutsigirwa. Anatomical yakakwira-rebound tsoka yekunyaradza-yezuva-rese. Exclusive rabha inopa grippy traction. Chigadzirwa Information Chinyorwa Nhamba: 5051 Pro ...
New Arrival US 12 Spring Yakagadzirwa MuChina Zviputi Zvekunze Shangu
Dzivirira wako anokwikwidza kumusoro-kana-pasi pechikomo mune yakavimbika yekufamba shangu. Iyo yakagadzikana, yepakati-pepa yekufamba-shangu shangu dzakagadzirwa neanofema mesh mapaneru uye anogara akagadzirwa akafukidzwa. Robust yakakomberedzwa-chigunwe kudhiza inoratidzika nekavhara-kumusoro kuvharika, nyoro padded kola, dhiza-tab chitsitsinho, uye chinodzivirira chitsitsinho. Inoratidzira yakashambidzwa EVA tsoka yemubhedha uye yakawanda-inotungamira yeruboshwe rubole yekukweretesa yakanakisa dhizaini. Chigadzirwa Information Chinyorwa Nhamba: 5050 Chigadzirwa zita: yepakati kucheka kukwira anonyanya kufarirwa kunze kwekunze shangu yemam ...
Dzakakwira dzakakwira-gomo goridhe rekunze varume mutambo wekukwira shangu dzinofamba
Bhutsu ichaita kuti uchengetedzeke paunenge uchifamba netsoka kana kushanda mumakuru ekunze nekunyaradza kwekudzivirira uye kwenguva refu kubata kwekunze. Camouflage nylon mesh uye synthetic pu yepamusoro. Yepamusoro-pepa bhutsu inopa yakawedzera dziviriro yemukati. Yakaputirwa machira yakarukwa yekuwedzera mukati kati. Tsika yekumhara sisitimu yeimwe yakachengetedzeka yakakodzera. Ihuremu, yakasimba fork shank inova inochinja uye kugadzikana. Yakakwira-rebound midsole inotora maitiro kune yakanakisa kudzvinyirira kunyura uye makumbo tsoka dzako pr ...
2020 Classic Kunze Kwekunze Inodzika Mesh Kubhururuka Hiking Sport Shangu Kune varume nevakadzi
Idzi shangu dzinozvirumbidza dzakareruka asi dzakasimba mesh kumusoro nehuremu rakagadzika iro rakagadzirira kutora marudzi ese epasi. Low-profile trail-hiking shangu yakagadzirwa neyekuita mesh kumusoro. Lace-up kuvharwa kwekukurumidza kugadzirisa uye kwakachengeteka fit. Inodzivirira chigunwe. Imwe-density EVA midsole yekugara kwenguva refu pasi petsoka kugadzikana uye kuvhiringidza kunyudza. Rubber Outole inopa kwenguva refu kusarudzika. Chigadzirwa Chinyorwa Article No: 5052 Chigadzirwa zita: fashoni ruvara neyemhando dhizaini yekunze shangu ...
Amazon Anopisa Mapati anomhanya Shangu dzeVarume vekunze Shangu Mugadziri
Iyo shangu yekufamba inokutendera kuti unakirwe nguva imwe neimwe iri munzira neyavo mamiriro ekunze-akagadzirira kuvaka, kutsigirwa pasi petsoka, uye yakavimbika kubata. Suede dehwe uye mesh kumusoro. Rwakadzika rurimi uye kola. Inodzivirira zvigunwe Yekare Lace-up system yeakachengeteka fit. Chitsitsinho dhiza tebhu. Kufema mesh lining. Inobviswa inakadonhedzwa insole inopa shanduko inotsigirwa uye pasi petsoka nyaradzo. Dzvinyiriro-yakaumbwa EVA midsole yekugadzikana uye nyaradzo. GRIP Outole inopa yakasimba tenderera ...